Category: featured, အိန္ဒိယ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်း |
Khaing Zar Aung says:
Saw Thandar says:
Chit Pyone Maung says:
lin kyaw says:
About: Cho Wut Yee says:
i m fan of ur page and i try so many recipe from ur page
i got myanmar font from ur page where it is written as zaw gyi font ya yu par!!!
but now myanmar font in my laptop suddenly disappear
if u still have that link please share me ama
http://i61.photobucket.com/albums/h47/chowutyee/zawgyi_logo2.jpg ဒီလင့်မှာ download လုပ်ပါနော်.. 🙂
now i can see all of ur pages again
မ Wutyee ရေ ကျေးဇူ: တင် လိုက်တာ။ Spices ဘေး မှာ English လို ဘာ သာ ပြန် ပေးထားလို့။
Plz try it sis! 🙂
မမလုပ်ထားတာ အရမ်းရမ်းစားချင်တာပဲ ^_^ အရမ်းလည်းကြိုက်တယ်
zaw myo aye says:
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် 🙂
thanks.wishes for you all the best.
Thanks you too sis 🙂
You r welcame 🙂
အရမ်းစားလို့ကောင်းမယ့်ပုံဘဲနော်။ ပစ္စည်းတွေအရင်ဝယ်စုလိုက်ဥိးမယ်။ ဒါပေမဲ့ဝတ်ရည်ရယ် ရန်ကုန်ကလို ကြက်သားဒန်ပေါက်(နီလာဒန်ပေါက်)နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူနိုင်မယ့်ချက်နည်းလေး တင်ပေးလို့ရရင် တင်ပေးပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
့ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်နော်
oo myo says:
ဒံပေါက်ထဲမှာ ထောပတ် ဘာ လို့မထည့်တာလဲ ခင်ဗျ။ လူကြီးတွေသွေးတိုး နှင့်မတည့် လို့ မထည့်တာ လို့တော့မဖြေပါနဲ့
ဒီဒန်ပေါက်က ရန်ကုန်မှာ ရောင်းတဲ့ ဒန်ပေါက်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အိန္ဒိယစတိုင် ဒန်ပေါက်ပါ။ သူချက်နည်းမှာ မပါလို့ပါ..
saw gerald says:
ညီမလေးဝတ်ရည်ခင်ဗျား…ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိစဉ်ကဆိုရင်..most of my community are Muslim, so i like their taste ,for example ဟိုအ၇င်တုန်း
ဟုတ်ကဲ့။ ကြက်သားသုပ် လုပ်နည်းလေး မကြာခင် တင်ပေးပါ့မယ်
wai lay says:
နေ့တိုင်းဝင်ကြည့်ရလောက်ကောင်း နေပါတယ်။ အမ အားရင်ဖျော်ရည်လုပ်နည်း သင်ပေးပါနော်။
ဟုတ်ကဲ့။ တင်ပေးပါမယ်။ ကျေးဇူး၊ နောက်လည်း လာလည်ပါအုန်း.. 🙂
ဒီဆိုဒ်ရဲ့ လိပ်စာက DVB မှာတောင်ပါလာတယ်။
ခု DVB မှာ ကြော်ငြာတာတွေ့လို့ ထပ်လာကြည့်တာ။
၀တ်ရည်ကလည်း လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါနော်။ နောက်လည်း လာလည်ပါအုန်း
This one is really good, plz try it
I like ur website, thanks you အမ
Thanks also bro 🙂
Nan Phyu says:
တော်တော် အဆင်ပြေတယ်။ အရမ်းလည်းစားကောင်းတယ်
Really Glad to hear sis 🙂
စားလို့ ကောင်းမဲံ့ ဒါန်ပေါက်ပဲံ
အမရေ ဆန်တည်တာကရေဆူပီဆိုတာနဲ့၁မိနစ်ပဲထပ်တည်ရမှာလား။ ကြက်သားကိုအောက်မှာခင်းပီးဆန်ကိုအပေါ်မှာတင်ပီးစချက်တဲ့အချိန်ကျရင်အောက်ကအိုးမကပ်အောင်ရေထည့်စရာလိုသေးလားဟင်အမ? ဖြေပေးပါနော် ချက်စားကြည့်မလို့အားလုံးဝယ်ပီးသွားပီ :). Thz so much
ဟုတ်တယ် ညီမ ၁မိနစ်ပဲ ထပ်တည်ရမှာ။ ဆန်က တ၀က်ပဲ ကျက်ဖို့ လိုသေးတယ်။ ကြက်သားကို အောက်မှာ ထပ်ခင်းပြီ ချက်ရင် ရေထပ်ထည့်ဖို့မလိုဘူး။ အိုးကပ်မှာ ပူစရာမလိုပါဘူး၊ Non-stick ဒယ်ပြားနဲ့ဆို အဆင်ပြေပါတယ်. .ကျေးဇူး လုပ်စားကြည့်နော်
ထည့်စရာ မလိုဘူး sis. ၀တ်ရည်လည်း မချက်ခင်က စိတ်ပူနေတာ။ တကယ်ချက်ကြည့်တော့ မလိုဘူး။ ဒီနည်းအတိုင်းချက်ရုံပဲ
[…] ကြက်သား ဒန်ပေါက် […]
မမ ဒန်ပေါက်အရမ်းကောင်းပဲ။ချက်ရတာလည်းမခက်ဘူးနော်။မေမေက မမ ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့ ။
ညီမကို မမ ကသင်ပေးလို့ တဲ့ ။ ညီမကဟင်းချက်ရတာအရမ်းဝါသနာပါတယ်။မမ နားကနည်းတွေယူပြိး
ချက်ကျွေးတာ အားလုံးကြိုက်ပဲ။မမဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေနော်။ကျေူးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ညီမကကြက်သားမုန့် နည်းနည်းထည့် လိုက်တယ်။အရသာလေးလေး လေးဖြစ်သွားတယ်။
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေနော် ညီမ… 🙂
su pyae thu says:
အမ ကြက်သားနှပ်ထားတာကိုအောက်မှာခင်းပီး ဆန်ထည့်တော့ ရေထည့်ရမှာလား
ရေ ထည့်စရာမလိုဘူး။ ကြက်သား ဒိန်ချဉ်နဲ့ နုပ်ထားတာမို့ ခဏလေးနဲ့ ကျက်တယ်… 🙂
ကြက်သားတွေခင်းပီး ဆန်တွေတင်တဲ့အခါ ရေထည့်ရသေးလား အမ
ရေထပ်ထည့်ဖို့ မလိုဘူး။ မီး အတိုးအမြင့်က ချက်နည်းထဲမှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း အတိအကျလုပ်ရင်ရပြီ…
ကြက်သားဒံပေါက် က ဟင်းခတ်အချိုမှုန့်တစ်ခုမှမပါဘူးနော်
ဟုတ်ကဲ့၊ ဆားပဲ ထည့်ထားတာ။ အကယ်၍ ထည့်မယ်ဆိုလည်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း(ဟင်းခတ်မှုန့်) ထည့်လို့ရပါတယ်။ မထည့်လည်း ရပါတယ်။.. 🙂
Great Cooking fri!
ကျေးဇူး သူငယ်ချင်း.. 🙂
Wai Wai Phyo Ei says:
စားလို့ အရမ်းကောင်းတယ် frd.. လုပ်စားကြည့်နော်..
ွှTin Tin Su says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လက်တွေ့ ချက်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်နော်။
ဟုတ်ကဲ့ ချက်စားကြည့်ပါနော် sis.. ;D
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော် sis.. 😉
yamin htun says:
အမရေ….ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ညီမကဟင်းချက်ဝါသနာပါပြီး အိမ်မှာလဲတနေ့တမျိုးချက်စားနေကျပါ…. စားချင်တဲ့ဟင်းရှိရင် ချက်ရမှာမကြောက်တော့ပဲ..အမwebsiteထဲဝင်ကြည့်ပြီး..ချက်နေတာ.. အရမ်းအဆင်ပြေပြီးစားလို့ကောင်းပါတယ်….ဒါ့ထက်မက..ဟင်းလျာတွေအများကြီးတင်နိုင်ပါစေနော်…..
ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ပါစေ sis ရေ။ အားပေးနေတယ်ဆိုလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်..
Thanksalot for ur recipes sis! You are the best! Since we are living abroad, we really miss our traditional burmese food..and you are our savior! 🙂
You are so welcome sis ^_^
may dadar says:
Ma Wutyeeေ၇ ဇာပွင့်နဲ့ နာနတ်ပွင့်ကတူတူဘဲလာဟင်း
ဇာပွင့် နဲ့ နတ်နတ်ပွင့် မတူပါဘူး sis.. ဇာပွင့်က Javitri လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နာနတ်ပွင့်ကို Star nut လို့ ခေါ်ပါတယ်.. 🙂
ဟီးဟီး LOL 🙂
khin san yee says:
Thank you for your share how to cook.Today I cooked Biryani but no good.I found your web side so next time I will try to cook. aunty ksy
Please try Aunty!! 😀
I want to your reply mail.
My mail : chowutyee(at)googlemail(dot)com
I looking for ၀က်သနီချက်နည်။ . I don’t find it so you don’t have it. I want to know.
saffron ကုန်ဈေးတန်း မှာရပါတယ်
1. Is thereaMyanmar version of Dan bauk? If there is, could you please oblige?
2. By the way when you mentioned Kalaway leaves translated as bay leaves. I do not think they are the same. Bay leaves looks like leaves with one central vein and small ones arising from the central vein on the both sides. The leaves in your photos look rounder and have about5veins coming out from the stalk of the leaf. I am not sure what it is called for I have to have an English name to buy.
3. Also I do not like the masala in bottles bought from the shops where I live. I like to mix myself if I could to resemble the ones from Myanmar, can you help by giving mearecipe?
Sorry to be bothering you with so many questions.
Ku chat sar nay dae .. Ma pi Tay bu.. Bae loe pone San htut lar ma lae sait Pu nay dal .. Thank you AMA !!
I shall be most grateful if you can include the formula of masala from Yangon. The masala I could get here loses the smell very quickly. I like to do on my own if possible.
နှပ်ထာတဲ့ကြက်သားကို အောက်မှာထားပြီး ဆန် ကို အပေါ်မှာအုပ်ပြီး နာရီဝက်လောက် တည်ထားတော့ အောက်ကကြက်သားမတူးဘူးလား ?
Can you send meaphoto of the bay leaves you use here?
ချက်နည်းလေးသိပြီမို့ ချက်စားကြည့် လိုက်ပါအုံးမယ်။
I will try to post soon.. Thanks 🙂
ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစနော်။ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်.. 🙂
To cope with this problem, you will have to keep few things or guidelines in perspective as these guidelines
will help you to choose the best Sex Chatroulette room available over internet.
Let’s examine some of the main factors that contribute to the development of cysts,
and then the best things we can do to avoid them.
khaing su mon says:
၀တ်ရည် သင်တန်းတော့ မဖွင့်ပါဘူး sis 🙂
Plz try sis 😀
Many Thanks bro 😀
saffron ပုံကို ဒီလင့်မှာပါ http://www.wutyeefoodhouse.com/wp-content/uploads/2014/11/Safforn_Rice.jpg/ … အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော် bro.. 😀 ဟုတ်ကဲ့ ဖြေပေးပါ့မယ်..
ကြက်​သားသပ်​သပ်​ ဒံ​ပေါက်​ထမင်းသပ်​သပ်​ ချက်​လို့ရလားအစ်​မ
အမ မြန်မာလက်ဖက်ရည်ဖျော်နည်းလေးတင်ပေးလို့ ရမလား